Tani Afyare istuudiyaha Elk ku shaqeeya waa ku dhex naadi Best la No Deposit loo baahan yahay at our casino. Waxay ku salaysan tahay theme fool xun isboortiga Bull-fighting.The waa caanka ah ee Spain halkaas oo lab ah oo loo yaqaan matador ah dagaal-off dibi ah oo dhab ah. horumarinta ayaa gashado koofiyadaha fikirka ay ka badan fikradda ah oo ay la yimaadaan booska this. Shaki kuma jiro in ay si guul ah ku guuleystay qalbiyo badan in ama aan ciyaaryahan jeclaa Isboortiga caan.
About sameeysa boosaska Wild Toro
istuudiyaha Elk galay industry ee 2012 oo waa wax cusub in ay kaabiga software ciyaaraha ah. Afyare Tani waa ka mid ah, naadi Best la No Deposit baahan yahay ee ay sameeysa taas oo ay weheliso Bloopers, DJ Wild iyo Taco Brothers. Dad badan ayaa kulan xiiso badan la rajaynayaa in lagu horumariyo by sameeysa this.
Ciyaarta ayaa waxaa la dhigay in ka badan 5 duntu. Astaanta duurjoogta ah waxaa Toro ku qoran Ingiriisi in warqado huruud ah. firidhsan waxay astaan ​​u tahay matador cadhooday yar shaarib a. Waxay u muuqataa kaliya on 2aad, 3rd iyo ambadeen 4aad. Astaanta bonus waa Toro Bull ah taas oo u muuqata kaliya on ambadeen 5aad. The calaamadaha caadiga ah waa lacagta qadaadiicda oo dahab ah, iyo lacagta, iyo naxaasta ahayd iyo taageere weyn oo ornate oo ay weheliyaan a orange burburay iyo Rose ah cas. Bull Toro The dhaqmo sida duurjoogta Socodka ee ciyaarta iyo sida ay horizontal guuro bidixda, waxaa soo baxday kala firdhiyaa matador in symbols.The duurjoogta ah calaamad duurjoogta ah ma beddali karto kala firdhiso Matador ama gunno Bull Toro astaanta.
caga 3 matador fidiyana in dhalin kara Matador Respin Challenge aad u la 3 free dib-u-dhigeeysa. Marka weliba fidiyana muuqan on duntu ka inta lagu guda jiro ku wareegsan oo dib-u-dhigeeysa, dheeraad ah dib-u-dhigeeysa uruursado. Wareeggii dhamaado marka astaanta duurjoogta u muuqataa on duntu ku.
The gameplay iyo saamaynta animation ayaa ka dhigay booska this Best boosaska la No Deposit baahan yahay. Afyare waxaa qaadaan dareenka ka ciyaaryahan adduunka oo dhan, maxaa yeelay, gaar ahaan ka mid ah xiiso feature wilds socodka. Markaas waxaa jira dabcan ka dhigeeysa xor ah oo loo laablaabi ururinta lamoodaa kuu. On iyo Wild Toro dhigaa ganay soo jiidasho leh iyo cayaar ah by istuudiyaha Elk iyo unbaa waa naadi Best la No Deposit baahan yahay.